नेपालमा एकैदिन ३ सय ८ जना कोरोना संक्रमित थपिए, सक्रिय संक्रमित कति ? Canada Nepal
नेपालमा एकैदिन ३ सय ८ जना कोरोना संक्रमित थपिए, सक्रिय संक्रमित कति ?
काठमाडौँ। सरकारले पछिल्लो २४ घण्टामा मुलुकभर थप ३ सय ८ जनामा कोरोनाभाइरस संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिएको छ ।
बिहिबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकाअनुसार ८ हजार ९ सय ९ वटा परीक्षण गर्दा ३ सय ८ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो । यससँगै कूल संक्रमितको संख्या ८ लाख २० हजार २ सय ८५ (पीसीआर टेस्टबाट) र (एण्टीजेनबाट) ९५ हजार ४ सय २४ पुगेको छ।
साथै पछिल्लो २४ घण्टामा २ सय ९८ जना कोरोनाभाइरस संक्रमणमुक्त भएसँगै निको हुनेको कूल संख्या ८ लाख १ हजार ४ सय २० पुगेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यस्तै हालसम्म सक्रिय संक्रमित ७ हजार ३ सय ४९ जना रहेका छन्।
यसैगरी पछिल्लो २४ घण्टामा मृत्यु भएका र त्यसअघि भएका गरी थप ३ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। हालसम्म कोरोनाभाइरस संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ११ हजार ५ सय १६ जना रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।
मंसिर ९, २०७८ बिहिवार १८:०३:३५ बजे : प्रकाशित
भारतमा तिव्र गतिमा फैलन थाल्यो ओमिक्रोन संक्रमण, एकैदिन १७ जनामा देखियो
काठमाडौं - भारतमा कोरोनाभाइरसको नयाँ भेरियन्ट ओमीक्रोन फैलन थालेको छ । भारतको दिल्ली, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र लगायतका स्थानमा ओमीक्रोनका केसहरु बढ्न थालेका छन् ।
आइतबार मात्र भारतमा १७ जना ओमिक्रोन संक्रमित थपिएका छन् । यससँगै हालसम्म भारतमा २१ जनामा ओमीक्रोन संक्रमण देखिसकेको भारतिय मिडियामा जनाइएको छ ।
यो हेर्दा भारतको समुदायमा सयौंको संख्यामा यो भाइरस रहेको आंकलन गर्न सकिन्छ । ओमीक्रोन संक्रमण हालसम्म विश्वका ३८ देशमा देखिएको छ ।
मंसिर २०, २०७८ सोमवार ०८:१५:१८ बजे : प्रकाशित